Psychol သိပ္ပံ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2013 စက်တင်ဘာ 23 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
Psychol သိပ္ပံ။ 2012 စက်တင်ဘာ 1; 23 (9): 984-993 ။
2012 ဇူလိုင် 18 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1177 / 0956797611435529
Ross ကအီး O'Hara,1 ဖရက်ဒရစ် X တို့မှာမျောက်လွှဲကျော်,1 Meg ဂျရတ်,2 Zhigang လီ,3 နှင့် ဂျိမ်းဃ Sargent4
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် Psychol သိပ္ပံ
keywords: အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာ, လိင်
ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုအပါအဝင်မြီးကောင်ပေါက် '' အန္တရာယ်အပြုအမူတွေအပေါ်မီဒီယာများ၏သက်ရောက်မှုများ, (အမျိုးသားကင်ဆာဌာန Institute, 2008), အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်း (P. Anderson တို့, de Bruijn, Angus, ဂေါ်ဒွန်, & အလျင်အမြန်, 2009), နှင့်ကျူးကျော် (, CA Anderson က et al ။ , 2003), ကျယ်ပြန့်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ အတော်လေးလျော့နည်းမီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်နှင့်နောက်ဆက်တွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်အပါအဝင်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဘယ်လိုသို့သော်လူသိများသည်။ အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုအဖြစ်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု (အက်စ်တီအိုင်တစ်ခုတိုးလာအန္တရာယ်တစ်ခုတိုးလာအရေအတွက်ကိုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိ၏ Kaestle, Halpern, Miller, & Ford, 2005) ။ မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက် delay လုပ်ခြင်း, ဒါကြောင့်, အက်စ်တီအိုင်အမေရိကန်နှုန်းထားများ (ထက်ပိုမို9သန်းအသစ်များကိုအမှုပေါင်းမြီးကောင်ပေါက်အကြားနှစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်တားဆီးရန်နိုငျဘဲ, Weinstock, Berman, & Cates, 2000), နှင့်အလားအလာ (အကြမ်းအားဖြင့် 64 unplanned ကိုယ်ဝန်တိုင်း 1,000 အမျိုးသမီးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် 19 သို့မဟုတ်အငယ်အဘို့အပေါ်ပေါက် unplanned ကိုယ်ဝန်သာဓကကိုလျှော့ချနိုင်ကြောင်း, Guttmacher Institute မှ, 2010) ။ အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေဘို့အန္တရာယ်အချက်များဖော်ထုတ်ခြင်းထို့ကြောင့်အရေးပါသောအများပြည်သူ-ကျန်းမာရေးအတွက်စိုးရိမ်ပါတယ်။ အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအပေါ်တစ်ခုမှာအရေးပါသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှု (မီဒီယာဖြစ်နိုင်သည်Wright, 2011) -specifically, ရုပ်ရှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှု (MSE) ။ လေ့လာမှုမှာကဒီမှာအစီရင်ခံကျနော်တို့အာရုံရှာပြောင်းလဲမှုများမှတဆင့်နှစ်ဦးစလုံးတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်, အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်များနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်အတူ MSE ၏အသင်းအဖွဲ့ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
လူကြိုက်များသောရုပ်ရှင်များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့တဲ့စည်းစိမ်နှင့်အန္တရာယ်အပြုအမူတွေကိုမြှင့်တင်စေခြင်းငှါအရာများစွာမြီးကောင်ပေါက်သည်။ 1950 မှ 2006 ကနေဖြန့်ချိရုပ်ရှင်၏စစ်တမ်း 84%, (PG-rated ရုပ်ရှင်၏ 68%, PG-82-rated ရုပ်ရှင်၏ 85% နဲ့ R ၏ 13% မှာ G-rated ရုပ်ရှင်၏ 88% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများပါရှိသောထက်ပိုမိုကြောင်းထင်ရှား ရုပ်ရှင် -rated; Nalkur, Jamieson, & Romer, 2010) ။ ဒါ့အပြင် PG-13-rated နဲ့ R-rated ရုပ်ရှင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ (အတိတ်ကာလဆယ်စုနှစ်အတွင်းတိုးမြှင့်ထားပါတယ်Nalkur et al ။ , 2010) ။ အလားအလာ ပို. ပင်အရေးကြီးသောမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနျြးမာရေးအတှကျသို့သော်ဤရုပ်ရှင်၏အများဆုံးလုံခြုံလိင်ဖော်ကျူးကြဘူးဆိုတာပါပဲ။ တစ်ဦးကအကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (70 မှ 1983 ကနေဖြန့်ချိရုပ်ရှင်များတွင်သရုပ်ဖော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူသောအမှု 2003% အသစ်ခင်မင်သိကျွမ်းမိတ်ဖက်များအကြားဖြစ်ပွားခဲ့သည်, 98% ဓတေားရန်မရည်ညွှန်းထည့်သွင်းခြင်း, 89% မျှအကျိုးဆက်များအတွက်ရလဒ်ကြောင့်ထင်ရှားGunasekera, Chapman, & Campbell, 2005) ။ ထို့အပြင် Pardun, L'Engle နှင့်ဘရောင်း (2005) ရုပ်ရှင်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာကသာ 9% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမြှင့်တင်မက်ဆေ့ခ်ျများပါရှိသောတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လူကြိုက်များတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်တဲ့သူဆယ်ကျော်သက်ထို့ကြောင့်တစ်ခုလက်တွေ့နှင့် / သို့မဟုတ်အန္တရာယ်-မြှင့်တင်ရန်ထုံးစံ၌ပုံဖော်နေသည်အများဆုံးသောလိင်များစွာသောသဘောတူညီချက်, ထိတွေ့လျက်ရှိသည်။
Wright (2011) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်မီဒီယာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့် activation မောင်းနှင်ကြောင်း posited ။ scripts လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါသူတို့အအပါအဝင်လူမှုရေးအခြေအနေများတွင်အမူအကျင့် options တွေကိုများကိုပေးစွမ်းနှင့် script များများ၏ content မကြာခဏမီဒီယာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်အပိုင်းတှငျဖျောပွထားသကဲ့သို့ပင်, ရုပ်ရှင်ယေဘုယျအားဖြင့် (ကြည့်ရှုခွင့်ပြုချက်နှင့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်ဆေ့ခ်ျများမပူဇော်Gunasekera et al ။ , 2005; Nalkur et al ။ , 2010), နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ၏ထိတွေ့ခြင်းမြင့်မားဒီဂရီထက်ပိုအလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေကြိုတင်ခန့်မှန်းတွေ့ရှိထားပြီး (Bleakley, Hennessy, Fishbein, Coles, & Jordan, 2009; ဘရောင်း, Halpern, & L'Engle, 2005) ။ ထို့အပြင်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ခါတစ်ရံ (ဤ script များသင်ယူဖို့ဖြစ်နိုင်သည်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာထွက်ရှာအံ့သောငှါဘရောင်း et al ။ , 2005) ။ တကယ်တော့အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက် (အသက်အရွယ်မရွေး 57-14) ၏ 16% (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏အဓိကအရင်းအမြစ်အဖြစ်မီဒီယာကိုသုံးပြီးအစီရင်ခံတင်ပြBleakley et al ။ , 2009).
activated script များအပြုအမူကိုလမ်းညွှန်ဖို့လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်, နှင့်မီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များအသုံးပြုကြသည်ထားတဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်သည် (Wright, 2011) ။ မြင့်မားသော MSE နှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်တွေထဲမှာရုပ်ရှင်များတွင်ပုံဖော်လိင် script များရှိသောကြောင့်ကြိုတင် Active ၏ကြိမ်နှုန်း၏အလွယ်တကူလက်လှမ်းဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါပိုမိုလွယ်ကူစွာတစ်ဦး script ကို activated သည်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကပေးထားသောအခြေအနေမှာလျှောက်ထားရမည်။ တကယ်တော့, longitudinal လေ့လာမှုများရုပ်မြင်သံကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှု၏ကြီးမြတ်သောဘွဲ့ (မြီးကောင်ပေါက်အကြား noncoital လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင် သာ. ကြီးမြတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုခန့်မှန်းကြောင်းပြသကြCollins et al ။ , 2004) နှင့်အစောပိုင်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက် (Ashby, Arcari, & Edmonson, 2006; Collins et al ။ , 2004; Martino, Collins, Kanouse, Elliott, & Berry, 2005), လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်များ, ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်မိဘအုပ်ထိန်းဘို့ကိုထိန်းချုပ်။ ထို့အပွငျ, ရုပ်ရှင်များ, ရုပ်မြင်သံကြား, ဂီတ, နှင့်မဂ္ဂဇင်းများအပါအဝင်မီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ, ပိုမိုထိတွေ့မှု, (မြီးကောင်ပေါက်အကြား noncoital လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်၏မြင့်မားဖြစ်နိုင်ခြေကိုနှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ဘရောင်း et al ။ , 2006; L'Engle, Brown, & Kenneavy, 2006; Pardun et al ။ , 2005) နှင့်အစောပိုင်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက် (ဘရောင်း et al ။ , 2006), ဆယ်ကျော်သက် '' နှင့်၎င်းတို့၏မိဘများ '' ဝိသေသလက္ခဏာများများအတွက်ထိန်းချုပ်ထား။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရုပ်ရှင်နှင့်ယောက်ျားရဲ့မဂ္ဂဇင်းပိုမိုထိတွေ့မှု (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ယုံကြည်မှုများကကမကထပြုခဲ့သက်ရောက်မှု, အစောပိုင်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်နှင့်အထီးကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအရေအတွက်ကိုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ရပ်ကွက်, Epstein, Caruthers, & Merriwether, 2011) ။ ဤရလဒ်သည်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူနှစ်မျိုးလုံးဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံ Wright ရဲ့မော်ဒယ်မှထောက်ခံမှုချေးငှားရမည်။
ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' အန္တရာယ်အပြုအမူအပေါ်ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်၏ဆိုးကျိုးများ
ရုပ်ရှင်နှင့်လူငယ်များအကြားရုပ်ရှင်၏လူကြိုက်များတွင်ဖော်ပြပါရှိသည်လိင်၏ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်နေသော်လည်းပိုပြီးသုတေသနမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ရုပ်မြင်သံကြား၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှမြှုပ်နှံထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ သက်သေအထောက်အထားမီဒီယာ၏အခြားပုံစံများအားဖြင့်ထက်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူရုပ်ရှင်အားဖြင့်ပိုပြီးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ (အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်များနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအပေါ် MSE ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြBleakley et al ။ , 2009; Pardun et al ။ , 2005) ။ ဥပမာအားဖြင့်, အထီးကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ဦးလေ့လာမှုမှာ (ရပ်ကွက် et al ။ , 2011), ရုပ်ရှင်မှသာထိတွေ့မှု (ရုပ်သံမှထိတွေ့မှု, ဂီတဗွီဒီယိုများနှင့်ယောက်ျားရဲ့မဂ္ဂဇင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကဲ့သို့) တိုက်ရိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်၏အသက်အရွယ်ခန့်မှန်းခြင်း, () ယောက်ျားရဲ့မဂ္ဂဇင်းများမှထိတွေ့မှုနှင့်အတူရုပ်ရှင်ထိတွေ့သွယ်ဝိုက်ပေါ့ပေါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အရေအတွက်ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရုပ်ရှင် '' ဆယ်ကျော်သက်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု '' ၏ longitudinal လေ့လာမှုများအားတသမတ်တည်းသက်ရောက်မှုကိုပြသပြီရုပ်ရှင်များတွင်ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုကိုထိတွေ့ဆေးလိပ်သောက်၏ Initiative နှင့်တင်းမာမှုလျှော့ချခန့်မှန်းထားပါတယ် (Dalton et al ။ , 2009; Sargent et al ။ , 2007; သေတမ်းစာ et al ။ , 2010), နှင့်ရုပ်ရှင်များတွင်သောက်သုံးရန်ထိတွေ့မှု (အရက်အသုံးပြုမှုစတင်များနှင့်တင်းမာမှုလျှော့ချခန့်မှန်းDal Cin et al ။ , 2009; မျောက်လွှဲကျော် et al ။ , 2010; Sargent, Wills, Stoolmiller, Gibson, & Gibbons, 2006; သေတမ်းစာ et al ။ , 2010).
လေ့လာမှုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကဒီမှာအစီရင်ခံလူကြီးအတွက် (ဆိုလိုသည်မှာမျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှု) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်၏အသက်အရွယ်နှင့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပေါ် (အသက် 16 မတိုင်မီဆိုလိုသည်မှာ,) အစောပိုင်း MSE ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဤရွေ့ကားဆက်ဆံရေး (အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦး longitudinal လေ့လာမှုကနေဒေတာတွေကိုသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်Sargent et al ။ , 2007) ။ ကျနော်တို့ (ရုပ်ရှင်များတွင်ပုံဖော်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုမှသင်တန်းသားများကို '' ထိတွေ့ခန့်မှန်းဖို့သဲသောင်ပြင်နည်းလမ်းကိုအသုံးချSargent, Worth, သဲသောင်ပြင်, Gerrard, & Heatherton, 2008) ။ ဤနည်းလမ်းကိုတရားဝင်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရတိုးမြှင့်ဖို့ရုပ်ရှင်များတွင်အန္တရာယ်အပြုအမူတွေ၏ဒုတိယ-by-ဒုတိယနိုင်တဲ့ coding ပါဝငျနှင့်ယခင်လေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်ထက်ကလူကြိုက်များတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတစ်ဦးထက်ပိုသောပြည့်စုံသောနမူနာအဘို့အခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဒါဟာဥပမာ (ဆေးလိပ်သောက်အပေါ်ရုပ်ရှင် '' သက်ရောက်မှု၏လူငယ်များအကြားလေ့လာမှုများအတွက်အတည်ပြုခဲ့ပြီး, Sargent et al ။ , 2007) နှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်အရက်-related ပြဿနာများ (ဥပမာ, ပေါ် Dal Cin et al ။ , 2009) ။ လက်ရှိလေ့လာမှု MSE ခန့်မှန်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်နှင့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်အတူ၎င်း၏ဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ဖို့သဲသောင်ပြင်နည်းလမ်းကိုသုံးစွဲဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။
MSE တိုးမြှင့်အာရုံခံစားမှုရှာ-တ္ထုများနှင့်ပြင်းထန်သောဆွရှာစိတ်သဘောထား (အားဖြင့်သွယ်ဝိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းယုံကြည်ဖို့အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်Arnett, 1994) ။ Sensation ရှာ (10 နှင့် 15 ၏အသက်အရွယ်အကြား peaking, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းထ, ပြီးတော့နှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှတဆင့်ငြင်းပယ်Steinberg et al ။ , 2008) ။ သာ. ကွီးမွတျအာရုံရှာအစောပိုင်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက် (နှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်Donohew et al ။ , 2000) နှင့်လူကြီးအတွက်ပေါ့ပေါ့လိင်ပိုမိုမကြာခဏထိတွေ့ဆက်ဆံမှု (Arnett, 1994) ။ ဒါဟာ (အာရုံရှာဇီဝဗေဒနှင့်လူမှုရေးနှစ်ဦးစလုံးအချက်များအနေဖြင့်ပေါ်ပေါက်ကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်Arnett, 1994), အရာထိုကဲ့သို့သော MSE အဖြစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှု, ဤရို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ တကယ်တော့လက်ရှိလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့နမူနာနှင့်အတူသုတေသန R-rated ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့် (အလှည့်အတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဆေးရွက်ကြီးနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်း၏အန္တရာယ်တိုးလာသော (သို့သော်မပေးအပြန်အလှန်) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းရှာကြံအာရုံခံစားမှုအတွက်နောက်ပိုင်းတွင်တိုးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကွောငျးတငျပွခဲ့သက de Leeuw et al ။ , 2011; Stoolmiller, Gerrard, Sargent, Worth, & Gibbons, 2010) ။ သို့သျောလညျးအာရုံရှာ၏ဖြန်ဖြေအကျိုးသက်ရောက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်မီဒီယာရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှလေးစားမှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာရန်, စမျးသပျခဲ့သေးပါဘူး။ လက်ရှိလေ့လာမှုမှာထို့ကြောင့်ကျနော်တို့အာရုံပြောင်းလဲမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်နှင့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အတူ MSE များ၏မျှော်လင့်ဆက်ဆံရေးကမကထပြုခဲ့ရှာကြံရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
ဒီလေ့လာမှုကနည်းလမ်းများစွာအတွက်အတိတ်သုတေသနအပေါ်သို့တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာယခင်လေ့လာမှုများ, အခြားမီဒီယာ (ဥပမာလိင်အကြောင်းအရာထိတွေ့မှုနှင့်အတူ MSE ပေါင်းစပ် ဘရောင်း et al ။ , 2006), အားဖြင့် MSE ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမို။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတှငျကြှနျုပျတို့ MSE အပေါ်သီးသန့်အာရုံစူးစိုက်။ ဒုတိယ, သဲသောင်ပြင်နည်းလမ်းတစ် 600 နှစ်ကာလအတွင်းယခင်သုတေသနများတွင်အသုံးပြုထားသည်ထက်အများကြီးပိုကြီးတဲ့နမူနာကိုကျော်ဖြန့်ချိ6လူကြိုက်များရုပ်ရှင်ထက်ပိုများ၏ content နိုင်တဲ့ coding အဘို့အခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ရုပ်ရှင် '' သက်ရောက်မှု၏တတိယအချက်အနည်းငယ်လေ့လာမှုများ longitudinal ကြပြီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဒေတာစုဆောင်းခဲ့ကြရာကျော်ကြာချိန်ကျွန်တော်တို့ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်များနှင့်အက်စ်တီအိုင်သို့မဟုတ် unplanned ကိုယ်ဝန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း postdebut လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များနှစ်ဦးစလုံးဆနျးစစျဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီလေ့လာမှုအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအပေါ်မီဒီယာသက်ရောက်မှုအာရုံရှာပြောင်းလဲမှုများကကမကထပြုခဲ့ကြသည်ရှိမရှိဆန်းစစ်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအထူးသကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက်ခဲ့ကြသည်:
hypothesis 1: အစောပိုင်း MSE, အာရုံခံစားမှုရှာထဲမှာတိုးကကမကထပြုခဲ့တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်၏အသက်အရွယ်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
hypothesis 2: အစောပိုင်း MSE, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်6နှစ်ကြာပြီးနောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်၏အသက်အရွယ်ကကမကထပြုခဲ့တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှု (ကကွန်ဒုံးမပါဘဲလိင်ဆက်ဆံဖက်များနှင့်ပေါ့ပေါ့လိင်၏ကြိမ်နှုန်းအရေအတွက်တိုးလာဆိုလိုသည်မှာ,) အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ဤရွေ့ကား data တွေကိုအောက်တိုဘာလ 2003 မှဇွန်လ 2009 ထံမှ spanning ခြောက်လှိုင်း longitudinal လေ့လာမှုအတွက်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အချိန် 1 မှာ, ဒေတာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်နေထိုင်သောအသက်နှစ်ပေါင်း 6,522 မှ 10 ကနေ 14 မြီးကောင်ပေါက်တစ်ကျပန်း-ဂဏန်း-dial တယ်လီဖုန်းစစ်တမ်းများတွင်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆက်တွဲသုံးနောက်ဆက်တွဲစစ်တမ်းများတိုင်း 8 လအတွင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကောက်ယူကြသည် ဟူ. ၎င်း, နောက်ဆုံးနှစ်ခုနောက်ဆက်တွဲ-ups အချိန်5ပြီးနောက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်7နှစ်နှင့် 1 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အချိန်6မှာ 2,718 ပါဝင်သူ (38.2% retention ကို) တုန့်ပြန်ပေမယ့် 18 အသက်အရွယ်နှစ်သို့မဟုတ်အဟောင်းတွေ (ခဲ့ကြသည်တဲ့သူမှသာပါဝင်သူများn = 1,300) မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသတင်းပို့ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ MSE လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်မတိုင်မီဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးကြောင်းသေချာစေရန်, ငါတို့သည်အဘယ်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက် (အချိန်2မတိုင်မီဖြစ်ပွားခဲ့သည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသင်တန်းသားများအနေဖြင့်ချန်လှပ်n 72 သင်တန်းသားများ၏နောက်ဆုံးနမူနာ left ရာ = 1,228) ။ နောက်ဆုံးနမူနာများတွင်ပါဝင်သူ (12 နှင့် 14 နှစ်အကြားအချိန် 1 မှာအဟောင်းခဲ့ကြသည်M = 12.89 နှစ်, SD = 0.79) နှင့်အချိန် 18 မှာအဟောင်း 21 နှင့်6နှစ်အကြား (M = 18.90 နှစ်, SD = 0.81) ။ နမူနာ 611 အထီး (49.8%) နှင့် 617 အမျိုးသမီး (50.2%) ဖွဲ့စည်း; 891 ဥရောပအမေရိကန် (72.6%) တို့က, 159 (12.9%) ဟစ်စပန်းနစ်တည်ကြသည် ဖြစ်. , 71 အာဖရိကန်အမေရိကန် (5.8%) ရှိ. , 107 သည်အခြားလူမျိုးရေးသို့မဟုတ်တိုင်းရင်းသားနောက်ခံ (8.7%) ဖြင့်ပြီးကြ၏။ သင်တန်းသားများကိုနမူနာများတွင်ထိန်းသိမ်းထားသောသူတို့သည်ခဲ့ကြသည်ထက်အချိန် 1 မှာအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်များနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပိုမိုအန္တရာယ်မှာနောက်ဆက်တွဲမှာဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ထိန်းသိမ်းထားကြသည်မဟုတ်သူသင်တန်းသားများကို (ပိုမိုမြင့်မား MSE နှင့်အာရုံခံစားမှုရှာကြံနှင့်အနိမ့်မိခင်တုန့်ပြန်အစီရင်ခံတင်ပြလျက်, သူတို့အိပ်ခန်းထဲမှာရုပ်မြင်သံကြားရှိသည်ဖို့ကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်ps <.001) ။ နောက်ဆက်တွဲတွင်ဥရောပအမေရိကန်များထက်လူနည်းစုများသိသိသာသာကျဆင်းသွားသည် (p <.02) ။
MSE အဆိုပါသဲသောင်ပြင်နည်းလမ်းကိုသုံးပြီးတိုင်းတာခဲ့သည်။ အချိန် 1 မှာ 523 နှင့် 1998 အကြားဖြန့်ချိသည့် 2003 ထိပ်တန်းဝင်ငွေရရှိခဲ့သည်ရုပ်ရှင်ထိုကဲ့သို့သောမိုးသည်းထန်စွာနမ်းသို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံမှုအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏သာဓကအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာစက္ကန့်များ၏အရေအတွက်သည်များအတွက် coded ခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီရုပ်ရှင်နှစ်ခုလေ့ကျင့်သင်ကြား coder တွေထဲကတစ်ခုအားဖြင့် rated ခဲ့သည်, ထိုရုပ်ရှင်၏ 10% တစ်ကျပန်း subsample (interrater သဘောတူညီချက်ကို double-coded ခဲ့သည်: r = .92) ။ တစ်ခုချင်းစီပါဝင်သူကျပန်းပိုကြီးတဲ့ရေကူးကန်ကနေရှေးခယျြထား 50 ရုပ်ရှင်တစ်မူထူးခြားတဲ့စာရင်းလက်ခံရရှိပြီးသူသို့မဟုတ်သူမမြင်ဘူးသောသူတို့ရုပ်ရှင်တွေရာကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာအားလုံး 523 ရုပ်ရှင်တွေထဲကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာသင်တန်းသားများကို '' စုစုပေါင်းထိတွေ့ extrapolate အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အလားတူလုပ်ထုံးလုပ်နည်းယခင်အကြောင်းအရာနိုင်တဲ့ coding ကတည်းကဖြန့်ချိထိပ်-ဝင်ငွေရရှိခဲ့သည်ရုပ်ရှင်ပါဝင်သော, ရုပ်ရှင် (2) ၏သေးငယ်ရေကူးကန်နှင့်အတူအချိန် 161 မှာအသုံးပြုခဲ့သည်။ (မရွေးကိုယ်စားလှယ်ရုပ်ရှင်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာစက္ကန့်များ၏အရေအတွက်နောက်ဆက်တွဲပစ္စည်းမရရှိနိုင်အွန်လိုင်းထဲမှာစားပွဲတင် S1 အတွက်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ ) ကျနော်တို့အချိန် 1 နှင့်အချိန်2မှာကြည့်ရှုအားပေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနာရီကဉျြးခြုပျနာရီအတွင်းသို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာစက္ကန့် converting အားဖြင့် MSE တွက်ချက် နှင့်အပြုသဘော skew ဘို့ပြင်ပေးဖို့စတုရန်းအမြစ်အသွင်ပြောင်းဖျော်ဖြေ။
Sensation ရှာကြံ သားသမီးတို့အဘို့ဒီဇိုင်းလေးကို item စကေး (အချိန် 1 နှင့်အတူတိုင်းတာခဲ့သည်: α = .60; အချိန် 2: α = .58; Stephenson, Hoyle, Palmgreen, & Slater, 2003) ။ ဤသည်ကိုအတိုင်းအရှည်အားဖြင့်ဖော်ထုတ်နှစ်ခုလေးယောက် Construction ပုတ် Zuckerman (1994) အာရုံခံစားမှုရှာ, စိတ်လှုပ်ရှား / စွန့်စားမှုရှာခြင်းနှင့်ပျင်းလွယ်ကူစွာထိခိုက်၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်; အပြင်ကရှာကြံ (ရှာ Sensation ၏ Arnett Inventory ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပြင်းထန်မှုပုတ်Arnett, 1994) ။ သင်တန်းသားများကိုအဆင့်မြင့်အာရုံရှာညွှန်းမြင့်မားတဲ့ရမှတ်များနှင့်အတူ, 1 ထံမှ4တစ်စကေးကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ဦးချင်းစီကို item မှတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီပါဝင်သူရဲ့ရမှတ်ချုပ်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ ဤသည်ကိုအတိုင်းအရှည် (မြီးကောင်ပေါက် '' ဆေးလိပ်နှင့်အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်းခန့်မှန်းဘို့အတည်ပြုထားပြီးက de Leeuw et al ။ , 2011; Stoolmiller et al ။ , 2010).
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်၏ခေတ် အချိန်6မှာပါဝင်သူများကသတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ အချိန်6မှာတိုင်းတာနှစ်ခုအစိတ်အပိုင်းများကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်: ကွန်ဒုံးမပါဘဲ vaginal- ၏တစ်သက်တာနံပါတ်သို့မဟုတ်ပါးစပ်-လိင်မိတ်ဖက် (ပွင့်လင်းတုံ့ပြန်မှု) နှင့်ပေါ့ပေါ့လိင်၏ဖြစ်ရပ်အရေအတွက် (က "လေးနက်သို့မဟုတ်တည်ငြိမ်ချိန်းတွေ့ဖက်" နဲ့အင်္ဂါဇာတ်လိင်အဖြစ်ကိုမသတ်မှတ်) (0 နေစကေးကို အသုံးပြု. သတင်းပို့, ဘယ်တော့မှ,5ရန်, ငါးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြိမ်) ။ အဲဒီနှစျခုပစ္စည်းများများအတွက်ရမှတ် ORDINAL variable တွေကိုသို့ recoded နှင့်ပေါင်းစပ်, α = .62 ခဲ့ကြသည်။1
Covariates (အာရုံရှာအပါအဝင်) MSE နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှစ်မျိုးလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချိန် 1 မှာတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ ကျား, မ, လူမျိုး, နှင့်အသက်အရွယ်သင်တန်းသားများကို '' မိဘအစီရင်ခံခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုဖြစ်စေအဖြစ်မိသားစုဖွဲ့စည်းပုံ code ဖို့အသုံးပြုတဲ့အတိုင်းအတာ (သူတို့အိပ်ခန်းထဲမှာရုပ်မြင်သံကြားခဲ့ရှိမရှိ, နေ့တိုင်းကြည့်ရှုအားပေး, အဘယ်သူကိုနှင့်အတူသူတို့နထေိုငျမည်မျှရုပ်မြင်သံကြား၏နာရီ, သူတို့ဘုရားကျောင်းတက်ရောက်ခဲ့သည်သို့မဟုတ်ဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုများအတွက်စေ့စပ်ဘယ်လောက်မကြာခဏအစီရင်ခံ မချွတ်မယွင်းသော or အပိုင်းပိုင်းခွဲ) ။ သင်တန်းသားများကိုလည်းကိုးကို item မိခင်-တုန့်ပြန်အတိုင်းအတာ (α = .71) နှင့်ခုနစ်ကို item မိခင်-တောင်းဆိုအတိုင်းအတာ (α = .59 ပြီးစီးခဲ့; ဂျက်ဆင်၊ Henriksen, & Foshee, 1998) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့အချိန်2နှင့်သင်တန်းသားများကို '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်အကြားဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်း MSE များအတွက်ထိန်းချုပ်ထား။2 ဒီ covariate အပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ဆက်တွဲ MSE များအတွက်ထိန်းချုပ်ရန်, အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်များနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတစ်ဦးခန့်မှန်းအဖြစ် (အသက် 16 မတိုင်မီဆိုလိုသည်မှာ,) အစောပိုင်း MSE အပေါ်အထူးအာရုံစိုက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါပျမ်းမျှ MSE 0.93 နာရီ (0.43 နာရီ-1.32 နာရီ interquartile အကွာအဝေး) ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှာကြံ Sensation ယေဘုယျအားဖြင့်အနိမ့်ခဲ့, M = 7.90 (SD အချိန် 2.39 မှာ = 1) နှင့် M = 8.07 (SD အချိန် 2.32 မှာ = 2) ။ အချိန်6အသုံးပြုပုံ 774 ပါဝင်သူ (63.0%) လိင်ကပွဲထွက်ခဲ့ပြီးဖူး: အသက်အရွယ် 40 မတိုင်မီ 5.2 (15%), အသက်အရွယ် 79 မှာ 10.2 (15%), 190 (24.5%) အသက်အရွယ် 16 မှာ 223 (28.8%) အသက်အရွယ် 17 မှာ, နှင့် 242 (31.2%) အသက်အရွယ် 18 မှာသို့မဟုတ်အထက်။ လိင်ကတက်ကြွစွာပါဝင်သူများအနက်တစ်သက်တာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များ၏ပျမ်းမျှအရေအတွက်က2(interquartile အကွာအဝေး: 1-4 မိတ်ဖက်) ဖြစ်ခဲ့သည်, ထိုသင်တန်းသားများ၏ 195 (25.2%) သူတို့တစ်တွေကွန်ဒုံးမပါဘဲပေါ့ပေါ့လိင်ရှိခဲ့ဖူးကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုသင်တန်းသားများကိုလိင်အချိန်6အားဖြင့်ပွဲထွက်ခဲ့ပြီးကြပါပြီမှအညီအမျှဖွယ်ရှိကြ၏ ထိုမှတပါး, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းလိင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အတူတူပင်အသက်အရွယ်မှာပွဲထွက်ခဲ့ပြီးနှင့်အလားတူ MSE ကဖော်ပြခဲ့သည်။ အထီး, သို့သော်, (ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ရှိခြင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်M = 3.43, SD လုပ်ခဲ့တယ်အမျိုးသမီးထက် = 5.94) (M = 2.48, SD = 3.91), t(1221) = 3.48, p = .001 နှင့်ထို့ထက် ပို. မကြာခဏကွန်ဒုံးမပါဘဲပေါ့ပေါ့လိင်မြားတှငျပါဝငျခွငျး (M = 0.43, SD လုပ်ခဲ့တယ်အမျိုးသမီးထက် = 1.14) (M = 0.29, SD = 0.87), t(1223) = 2.37, p <.02 ။ အမျိုးသားများက Time 1 နှင့် Time2နှစ်ခုလုံးတွင်ရှိသောအမျိုးသမီးများထက်မိန်းမများထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအာရုံခံစားမှုရှာဖွေမှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ts ကို (≥ 1195) ≥ 3.70, ps <.001 ။
စားပွဲတင် 1 ကျား, မအသုံးပြုပုံအပြည့်အဝဆက်စပ်မှု matrix ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုမြင့်မားသော MSE ကွန်ဒုံးမပါဘဲအစောပိုင်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်ပိုမိုလိင်ဆက်ဆံဖက်ပိုမကြာခဏပေါ့ပေါ့လိင်နှင့်နှစ်မျိုးလုံးလိင်ရှာပိုမိုမြင့်မားအာရုံခံစားမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်, ps <.001 ။ MSE နှင့်လိင်ဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်အကြားဆက်ဆံရေးသည်အမျိုးသားများအတွက်သိသိသာသာပိုမိုအားကောင်းခဲ့သည်။ rအမျိုးသမီးများအတွက်ထက် (595) = -.33, r(585) = -.21; z = 2.19, p <.03 ။ ပိုမိုမြင့်မားသောအာရုံခံမှုကိုရှာဖွေခြင်းသည်အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်မှု၊ လိင်ကြင်ဖော်ဘက်များပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့်လိင်မှုကိစ္စနှစ်ခုလုံးတွင်ကွန်ဒုံးမပါဘဲမကြာခဏကျပန်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လည်းဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ps <.01 ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အစောပိုင်းလိင်ဆက်ဆံမှုသည်လိင်ကြင်ဖော်ဘက်များပိုမိုများပြားလာခြင်း၊ ps <.001 ။
လေ့လာမှု Variables ကိုကြားဆက်စပ်မှု
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်၏ခန့်မှန်းဆန်းစစ်ရန်, (ငါတို့သည် Times သတင်းစာ 1 နှင့်2မှာအချိန်2မှာရှာကြံအာရုံ MSE နဲ့ကော့အချိုးကျ-အန္တရာယ်ဆုတ်ယုတ်ဖျော်ဖြေလျက်, covariates ပုံစံသို့ ဝင်.စားပွဲတင် 2) ။ မော်ဒယ်ရဲ့မြှောက်ဖော်ကိန်းများ omnibus စမ်းသပ်မှုχ, စံပြသိသာခဲ့ကြောင်းပြသ2(13, N = 1,133) = 805.01, p <.001 MSE အတွက်အန္တရာယ်အချိုးသည် ၅.၃၈ ဖြစ်သည်။ p <.001 က 1-sr တစ်နာရီစီတိုးသော MSE အတွက်စတုရန်းအမြစ်အတိုင်းအတာအရဆိုလျှင်အသက်တစ်ခုစီတွင်ပွဲ ဦး ထွက်သည် ၅ ကြိမ်ထက်ပိုများကြောင်းညွှန်ပြသည်။ အခြားသိသာထင်ရှားသည့်လိင်ဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်ခန့်မှန်းသူများသည်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းပြောင်းလဲခြင်း (အန္တရာယ်အချိုးအစား = ၁.၁၁၊ p <.001), ကျားမ (အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်အကြာတွင်ပွဲထုတ်ခဲ့သည်; အန္တရာယ်အချိုးအစား = 0.81, p အပိုင်းပိုင်းခွဲနေအိမ်များမှ = .006), မိသားစုဖွဲ့စည်းပုံ (သင်တန်းသားများကိုနဂိုအတိုင်းနေအိမ်များမှသူများလုပ်ခဲ့တယ်ထက်အစောပိုင်းကပွဲထွက်ခဲ့ပြီး; အန္တရာယ်အချိုး = 1.22, p = .030), နှင့်အိပ်ခန်း (အန္တရာယ်အချိုး = 1.20 အတွက်တစ်ဦးရုပ်မြင်သံကြားရှိခြင်း p = .024) ။ ရှင်သန်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိုလည်းတစ်ခုချင်းစီကိုကျား, မများအတွက်သီးခြားဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီကျားများအတွက်မော်ဒယ်သိသာခဲ့ပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်ပေါ် MSE ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု = (အထီးအဘို့အ 6.71 အန္တရာယ်အချိုးအစားပိုမိုအားကောင်းခဲ့သည် p <.001) အမျိုးသမီးများထက် (အန္တရာယ်အချိုးအစား = 4.24, p <.001) ။ မော်ဒယ်တွင် MSE ×ကျား၊ မရေးရာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများပါဝင်ခြင်းကဤခြားနားချက်ကိုသိသာထင်ရှားစေသည်။ p = .01 (ကြည့်ရှု သဖန်းသီး။ 1).
ပျမ်းမျှပြိုကွဲ၏အခြေခံပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ထားအဖြစ်အနိမ့်ရုပ်ရှင်နှိုင်းယှဉ်မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှု (MSE) နဲ့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းဘို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်၏အသက်အရွယ်အဘို့အ Adjustments ရှင်သန်မှု curves ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်၏အသက်အဘို့အကော့ Regression ၏ရလဒ်များ
အချိန်6မှာအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူခန့်မှန်းတစ်ဦးကဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ် Mplus 6.12 (မှာရှိတဲ့အားကောင်းတဲ့ချိန်အနည်းဆုံးရင်ပြင်ချဉ်းကပ်သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်Muthén & Muthén, 1998-2007) ။ သင်တန်းသားများကို; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်အသက် 1 = 14 နှစ်အသက်အရွယ်သို့မဟုတ်အထက်၏2= ≥ 15 နှစ်, အသက်3= 16 နှစ်, အသက်4= 17 နှစ်5= 18 အသက်အရွယ်နှစ်သို့မဟုတ်အငယ် (ထုံးစံ variable ကိုအဖြစ် recoded ခဲ့သည် ) အချိန်6မှာအပျိုကညာ5အဖြစ် coded သူရှိကြ၏။ Times သတင်းစာ 1 နှင့်2ထံမှချုပ်ဖော်ပြ MSE မော်ဒယ်အတွက် exogenous ရှိ၏ အချိန် 2, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်၏အသက်အရွယ်မှာရှာကြံအာရုံခံစားမှုနှင့်အချိန်6မှာအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ endogenous ခဲ့ကြသည်။ တစ်သက်တာလက်တွဲဖော်အရေအတွက် (အချက်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်၏ multi-ညွှန်ပြချက်ကျမှုကိုထငျရှား variable ကို, MSE နှင့်အသက်အရွယ် Single-ညွှန်ပြချက်ကျမှုကိုထငျရှား variable တွေကိုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော ဖြစ်. , အချိန်6မှာအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှစ်ခုညွှန်းကိန်းနဲ့ငုပ်လျှိုးနေ variable ကိုအဖြစ်မသတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်အဖြစ်ရှာကြံ Sensation သတ်မှတ်ထားသောခဲ့သည် တင် = .90) နှင့်ကွန်ဒုံး (အချက်တင် = .81) မပါဘဲပေါ့ပေါ့လိင်၏သာဓက။
အဆိုပါအခြေခံအဆောက်အဦးပုံစံ (သဖန်းသီး။ 2) χ, ဒေတာမှအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မထိုက်မတန်ပေးအပ်2(12, N = 1,133) = 11.11, p > .51; အကြမ်းဖျင်း၏အမြစ် - ယုတ် - စတုရန်းအမှား (RMSEA) <.001; အတည်ပြုမထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်း = 1.00; Tucker-Lewis ကအညွှန်းကိန်း> 1.00 ။ ဤပုံစံသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်၏ ၇၂% နှင့်အချိန် ၆ တွင်အန္တရာယ်ရှိသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများကွဲပြားမှု၏ ၅၈% ကိုရှင်းပြသည်။ ရလဒ်များမှာအယူအဆ ၁ - MSE ၏သွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်လိင်ဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်သက်တမ်းအပေါ်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းပြောင်းလဲမှုများမှသိသိသာသာဖြစ်သည်။ β = -72, p <.002 (MSE →အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းအပြောင်းအလဲများ - β = 0.09, p <.001; စိတ်ခံစားမှုအပြောင်းအလဲ→လိင်ပွဲ ဦး ထွက်၏အသက် - β = -0.14, p <.001) ။ MSE သည်လိင်ဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်၏အသက်ကိုလည်းတိုက်ရိုက်ခန့်မှန်းခဲ့သည်၊ β = -0.33, p <.001 ရလဒ်များသည်အယူအဆ ၂ ကိုထောက်ခံသည်။ ၆။ MSE သည်အချိန်ကာလ ၆ တွင်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပြုအမူကိုသွယ်ဝိုက်ခန့်မှန်း။ လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာအချိန်ကာလ မှနေ၍ အချိန် ၆ တွင်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် MSE ၏သွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာသိသိသာသာရှိသည်။ β = ​​2, p <.001 (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်→အချိန် ၆ တွင်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပြုအမူများ: β = -6, p <.001), ခံစားချက်ရှာခြင်းနှင့်လိင်ပွဲ ဦး ထွက်၏အသက်အရွယ်မှတဆင့်သွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သကဲ့သို့, β = 0.01, p <.005 နောက်ဆုံးအနေဖြင့် MSE သည် Time6တွင်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပြုအမူကိုတိုက်ရိုက်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။ β = ​​0.10, p <.05
အာရုံခံစားမှုရှာခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်၏အသက်အရွယ်ပြောင်းလဲမှုများကကမကထပြုခဲ့အဖြစ်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ရုပ်ရှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှု (MSE) ၏ဆိုးကျိုးများ။ MSE Times သတင်းစာ 1 နှင့်2မှာတိုင်းတာခဲ့သည်; အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှစ်ခုအစိတ်အပိုင်းများကို (ဆိုလိုသည်မှာတစ်သက်တာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အရေအတွက် ...
ဤပုံစံလမ်းကြောင်းကျား, မအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားခွင့်ပြုပါရန်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဖြတ်မော်ဒယ်ကိုလည်းဒေတာမှအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မထိုက်မတန်, χပေးအပ်2(43, N = 1,133) = 30.38, p > .92; RMSEA <.001; အတည်ပြုမထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်း = 1.00; Tucker-Lewis ကအညွှန်းကိန်း> 1.00 ။ MSE မှလိင်ဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်အရွယ်သို့တန်းတူညီမျှမှုကန့်သတ်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ခြင်းသည်မော်ဒယ်လ်အတွက်မသင့်လျော်စွာတိုးတက်ခဲ့သည်2(1, N = 1,133) = 8.28, p <.005 MSE ၏လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာသက်တမ်းအပေါ်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အမျိုးသားများအတွက်ပိုမိုအားကောင်းခဲ့သည်။b= -2.41, p <.001, အမျိုးသမီးများထက်b= -1.38, p <.001; သို့သော်အချိန် ၆ ရှိအန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပြုအမူအပေါ် MSE ၏သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုများမှာအမျိုးသားများနှင့်ဆင်တူသည်။ β = ​​6, p <.001 နှင့်အမျိုးသမီး, β = 0.17, p <.001
ပိုမိုမြင့်မားသောအစောပိုင်း MSE (အသက် 16 မတိုင်မီ) လူကြီးတွင်ပိုမိုအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို (ကကွန်ဒုံးမပါဘဲတစ်သက်တာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်နှင့်ပိုပြီးမကြာခဏပေါ့ပေါ့လိင်၏ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားနံပါတ်) ဟောကိန်းထုတ်, ထိုသို့အစောပိုင်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်ကနေတဆင့်, နှစ်ဦးစလုံးတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်ဒါကိုပြု၏။ ဤရလဒ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအစားအသောက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်၏အသက်အရွယ်ခန့်မှန်းကြောင်းယခင်တွေ့ရှိချက်များ (ဥပမာ, ထောက်ခံပါတယ် ဘရောင်း et al ။ , 2006), နှင့်က MSE (လူကြီးအတွက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပေါ်တစ်ဦးတည်မြဲသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိကြောင်းအကြံပြုအဲဒီတွေ့ရှိချက်ကိုတိုးချဲ့ရပ်ကွက် et al ။ , 2011) ။ MSE ကိုလည်းအာရုံရှာတစ်ခုတိုးမှတဆင့်သွယ်ဝိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်အတူရုပ်ရှင်ထိတွေ့မှုအာရုံခံစားမှုအတွက်ပုံမှန်မြင့်တက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းရှာကြံအရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်းအလိုငှါနောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထားများကိုထောက်ပံ့ပေးSteinberg et al ။ , 2008), အားဖြင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အန္တရာယ်အပြုအမူမြှင့်တင် (က de Leeuw et al ။ , 2011; Stoolmiller et al ။ , 2010) ။ အာရုံခံစားမှုအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဟာလိင်အကြားအလားတူဖြစ်ခဲ့သည်ရှာကြံပေမယ့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အချိန်6မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်နှင့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် MSE ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, အမျိုးသမီးထက်ယောက်ျားတို့တွင်အအားကောင်းခဲ့သည်။ (| .33 |) သေးငယ်တဲ့မှ (| | .01) ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် MSE ၏သက်ရောက်မှု၏အရွယ်အစားအလယ်အလတ်ကနေအရွယ်ရှိသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကျိုးနပ်သည်။ သို့သော်အကြီးဆုံးတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်ပေါ် MSE ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအဘို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည် MSE ထိုကဲ့သို့သောသဘောထားတွေပြောင်းလဲမှုများကဲ့သို့သောအခြားအလားအလာဖျန်ဖြေယန္တရားများ, (အပေါ်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုဘရောင်း et al ။ , 2005) သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များ (Wright, 2011) ။ မြီးကောင်ပေါက်အကြား MSE ၏ပျံ့နှံ့ပေးထားကျနော်တို့ MSE ပင်သေးငယ်တဲ့သက်ရောက်မှုမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ health အတွက်လည်းအရေးကြီးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုကန့်သတ်မြီးကောင်ပေါက် '' MSE ဟာသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်လည်းနောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမှာသူတို့ရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလျှော့ချမယ်လို့အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤနည်းဗျူဟာ (အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များ၏ဝယ်ယူကန့်သတ်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ် activation သူတို့ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်မီဒီယာများ၏တိုက်ရိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု attenuate နိုင်Wright, 2011) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, MSE ကန့်သတ် (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းပုံမှန်အားဖြင့်အတွေ့အကြုံရှိရှာကြံအာရုံထဲမှာတိုးနှောင့်နှေးစေခြင်းငှါSteinberg et al ။ , 2008အလှည့်အတွက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်နှင့်နောက်ဆက်တွဲထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှောင့်နှေးနိုင်ခြင်း), အရာ, (Arnett, 1994; Donohew et al ။ , 2000) ။ လူငယ်များသည် '' MSE ကန့်သတ် (သို့သော်, ရုပ်ရှင်များတွင်ပုံဖော်လိင်၏ copious ပမာဏပေးထားတစ်ခက်ခဲတာဝန်ဖြစ်နိုင်သည်Gunasekera et al ။ , 2005; Nalkur et al ။ , 2010) ။ တဦးတည်းကတိပေးချဉ်းကပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးသို့မီဒီယာ-စာတတ်မြောက်ရေးသင်တန်းပေးခြင်းထည့်သွင်းပါဝင်ပတ်သက်နေလိမ့်မယ်။ မကြာသေးမီကဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဟာသက်တူရွယ်တူဦးဆောင်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ-စာတတ်မြောက်ရေးသင်ရိုးညွှန်းတမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. ရွယ်တူချင်းဖိအားခုခံအတွက်နဝမတန်းကျောင်းသားများကို '' Self-ထိရောက်မှုတိုးတက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏စံတန်ဖိုးပျံ့နှံ့သူတို့ရဲ့အမြင်လျှော့ချ, သူတို့ရဲ့တိုးတက်ကြောင်းပြသ abstinence ဆီသို့သဘောထားများ (Pinkleton, Austin, Cohen, Chen, & Fitzgerald, 2008).
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုတချို့ကန့်အသတ်အသိအမှတ်ပြုရပါမည်။ ပထမဦးစွာတက်ရောက်လာကြသူများ (လေ့လာမှုမှာထိန်းသိမ်းထားသူတွေကိုခဲ့ကြသည်ထက်အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်နှင့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက် သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်မှာနောက်ဆက်တွဲမှာ longitudinal သုတေသနအတွက်ပုံမှန်ပုံစံဆုံးရှုံးခဲ့ရယောက်ျားလေးများ et al ။ , 2005) ။ ဒါဟာတဖက်သတ် attrition လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များအပေါ် MSE ၏စစ်မှန်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုအထင်သေးမှုကြပေမည်။ အရက်နှင့်ဆေးလိပ်အသုံးပြုမှုအပေါ်မီဒီယာ၏ထိတွေ့ခြင်းသက်ရောက်မှုအခြားနိုင်ငံများအနေဖြင့်အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်နမူနာကြားတွင်အလားတူဖြစ်တွေ့ပါပြီပေမယ့်ဒုတိယ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကို, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-ပညာရေးသင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်အတူနိုင်ငံများနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ရှိသူများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းမှယဘေုယမပြုစေခြင်းငှါ (ဥပမာ, Morgenstern et al ။ , 2011) ။ တတိယအချက်သင်တန်းသားများကိုသူတို့အနည်းဆုံး 18 နှစ်ရှိခဲ့ကြသည်သည်အထိမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသတင်းပို့နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်၏အသက်အရွယ်အဘို့မိမိတို့နောက်ကြောင်းပြန်မှတ်ဉာဏ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များ၏အရေအတွက်နှင့်ကွန်ဒုံးမပါဘဲပေါ့ပေါ့လိင်၏သာဓကထို့ကြောင့် biased ခဲ့ကြပေမည်ခဲ့ပါဘူး။ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်အတူနောက်ထပ်ရုပ်ရှင်များစောင့်ကြည့်သူကိုမြီးကောင်ပေါက်သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုချဲ့ကားဖို့ပိုဖွယ်ရှိဖြစ်လျှင်, ဥပမာ) ဒီဘက်လိုက်မှု MSE နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြပါလျှင်ဤသည်ပိုပြီးပြဿနာဖြစ်လိမ့်မည်။
(ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်အဘို့အထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်) ကြှနျုပျတို့၏ data တွေကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောမောင်နှမများနှင့်ရွယ်တူများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဖြစ် MSE နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေးရှက်ကြောက်စေခြင်းငှါအခြားအအချက်များ၏အစီအမံ, လိင်ဆီသို့မိဘသဘောထားများနှင့် pubertal status ကိုမပါဝင်ခဲ့ချေ။ အလားတူပဲကျနော်တို့အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်များနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၏အသက်အရွယ်အပေါ် MSE ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသိမြင်မှုသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြီဆန်းစစ်နိုင်ခြင်းရှိကြ၏။ ဤအပြုပြီများအတွက်တူညီသော data တွေကိုသုံးပြီးယခင်လေ့လာမှုများပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအပေါ်ရုပ်ရှင် '' သက်ရောက်မှုပုံမှန်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုသူများသည် (ဆိုလိုသည်မှာ, ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုသူရှေ့ပြေးပုံစံ) ၏ရိပ်မိမျက်နှာသာအတွက်အပြောင်းအလဲတ္ထုများသုံးစွဲဖို့အမူအကျင့်ဆန္ဒရှိကြောင်း, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်. မျှော်လင့်ထားကကမကထပြုခဲ့ကြသည်ပြပြီ, ရွယ်တူချင်းအကြားဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း (Dal Cin et al ။ , 2009; မျောက်လွှဲကျော် et al ။ , 2010; သေတမ်းစာ et al ။ , 2010) ။ အနာဂတ်သုတေသနကြီးတွေ screen ပေါ်မှာလိင်ကိုမြင်လျှင်အစစ်အမှန်လောကရှိလိင်ဆက်ဆံစအဘယ်ကြောင့်စူးစမ်းဖို့အလားအလာပြုပြီဆနျးစစျသငျ့သညျ။
အနာဂတ်လေ့လာမှုများလည်းအထူးသဖြင့်အာရုံရှာပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပတ်သက်. အတူလူကြိုက်များတဲ့ရုပ်ရှင်များတွင်အခြားအအန္တရာယ်အပြုအမူတွေ၏သရုပ်ဖော်ဖို့ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအနေဖြင့် MSE ၏သက်ရောက်မှုခွဲခြားဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာရှာဖွေလျက်အာရုံခံစားမှုအတွက်အပြောင်းအလဲများအထူးသ MSE ဖို့ဒါမှမဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-oriented ရုပ်ရှင်များ (ဥပမာအရက်သုံးစွဲခြင်း၏အခြား Co-ဖြစ်ပေါ်ဒြပ်စင်နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသေချာပေ; Stoolmiller et al ။ , 2010) ။ အနာဂတ်အလုပျအတှကျအရေးပါသော Avenue လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် MSE ၏သက်ရောက်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွေကပေါ်ကနေရုပ်ရှင်နှင့်နောက်ဆက်တွဲအရက်သုံးစွဲခြင်းအတွက်သောက်သုံး၏ပုံဖော်ခြင်း (ဥပမာထိတွေ့ရန်ရှိမရှိဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် Dal Cin et al ။ , 2009), (မြီးကောင်ပေါက် '' အရက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုမူလကပင်ရောယှက်ဖြစ်ကြောင်းပေးထားCooper က, 2002).
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုပြိုင်ပွဲအားဖြင့်တည်းဖြတ်ခဲ့ကြပေမည်။ အာဖရိကန်အမေရိကန်တွေဥရောပအမေရိကန်များ (ပြုပါထက်ပိုပြီးအက်စ်တီအိုင်တစ်ဦးနုပျိုအသက်အရွယ်မှာပွဲဦးထွက် sexually ပိုပြီးအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနှင့်စာချုပ်လေ့Cavazos-Rehg et al ။ , 2009; Halpern et al ။ , 2004; Kaestle et al ။ , 2005) ။ သို့သော်အာဖရိကန်အမေရိကန်တွေကိုလည်း (လိင်၏မီဒီယာပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုမှဥရောပအမေရိကန်များထက်လျော့နည်းတုံ့ပြန်မှုဖြစ်လေ့ဘရောင်း et al ။ , 2006) နှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်း (မျောက်လွှဲကျော် et al ။ , 2010) ။ ကျွန်တော်တို့ကိုအပြေးပြိုင်ပွဲအားဖြင့်ဖြည့်ညှင်းစမ်းသပ်ဖို့အတှကျကံမကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုရဲ့နမူနာလည်းအနည်းငယ်အာဖရိကန်အမေရိကန်တွေပါဝင်သည်။ အနာဂတ်သုတေသနနှင့်မည်ကဲ့သို့ရုပ်ရှင်လူငယ်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးခြင်း, ဘယ်လိုကျန်းမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမြှင့်တင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ဒီသြဇာကိုတားဆီးဖို့တဲ့အခါပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုအဘို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်။
ဒါဟာသုတေသနဂျိမ်းဃ Sargent မှကနျြးမာရေးထောက်ပံ့ရေး CA077026 နှင့် AA015591 အမျိုးသား Institutes နေဖြင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
1အချိန်6မှာအပျိုကညာဖြစ်နှင့်သောသင်တန်းသားများကိုကွန်ဒုံးမပါဘဲပေါ့ပေါ့လိင်ခဲ့ပွီးလြှငျဘယ်တော့မှအဖြစ် coded ခဲ့ကြသည်။ တစ်သက်တာလက်တွဲဖော်အရေအတွက်ပါးစပ်-လိင်မိတ်ဖက်ပါဝင်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်ကညာခဲ့ကြသူအ 105 သင်တန်းသားများကို (အပျိုကညာ၏ 23.1%) တစ်ဦးအန္တရာယ်များ-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-အပြုအမူသုညထက်ကြီးမြတ်ဂိုးသွင်းရှိခဲ့ပါတယ်။
2ဥပမာ, ဒီအတိုင်းအတာအဘယ်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်အချိန်3မှကြိုတင်ခဲ့ပေမယ့်ဘယ်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်အချိန်4မှကြိုတင်ဖြစ်ခဲ့သည်သင်တန်းသားများအဘို့အ Times သတင်းစာ 3,4နှင့်5မှာ MSE ဖွဲ့စည်းပါဝင်သူများအဘို့အချိန်6မှာ MSE ဖွဲ့စည်း။
အန်ဒါဆင်, CA, Berkowitz L ကို, Donnerstein အီး, Huesmann LR, ဂျွန်ဆင် JD, Linz: D, Wartella ENM, et al ။ လူငယ်မီဒီယာအကြမ်းဖက်မှုများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ 2003; 4: 81-110 ။
အန်ဒါဆင် P ကို, က de Bruijn တစ်ဦးက, Angus K ကိုဂေါ်ဒွန် R ကို, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအရက်သေစာအသုံးပြုမှုအပေါ်အရက်ကြော်ငြာနှင့်မီဒီယာ၏ထိတွေ့ခြင်းအလျင်အမြန် G. အသက်ရောက်မှု: longitudinal လေ့လာမှုတစ်ခုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ အရက်နှင့်အရက်။ 2009; 44: 229-243 ။ [PubMed]
Arnett ဂျေ Sensation ရှာကြံ: အသစ်စိတ်ကူးအသစ်တစ်ခုစကေး။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ။ 1994; 16: 289-296 ။
Ashby SL, Arcari CM, Edmonson ကို MB ။ ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုနှင့်လူငယ်ဆယ်ကျော်သက်များကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်၏အန္တရာယ်။ ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆေးပညာ၏မော်ကွန်း။ 2006; 160: 375-380 ။ [PubMed]
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်များ sex အကြောင်းမြီးကောင်ပေါက် '' ယုံကြည်ချက်ဆက်စပ်ဘယ်လို Bleakley တစ်ဦးက, Hennessy M က, Fishbein M က, Cole HC, ဂျော်ဒန်အေ။ ကနျြးမာရေးအပြုအမူ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2009; 33: 37-48 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ယောက်ျားလေးများတစ်ဦးက, Marsden J ကို, Stillwell, G, Hatch K ကို Griffiths က: P, Farrell အမ် longitudinal သုတေသနအတွက်တုံ့ပြန် attrition အသေးအဖွဲ: ဆယ်ကျော်သက်အရက်သောက်တစ်ဆောင်များတွင်လေ့လာမှုကနေလက်တွေ့သက်ရောက်မှု။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်။ 2005; 26: 363-373 ။ [PubMed]
ဘရောင်း JD, Halpern မှန် CT, L'Engle KL ။ အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းမိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစူပါသက်တူရွယ်တူအဖြစ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး၏ဂျာနယ်။ 2005; 36: 420-427 ။ [PubMed]
ဘရောင်း JD, L'Engle KL, Pardun CJ, Guo, G, Kenneavy K ကို Jackson က C. Sexy မီဒီယာကိစ္စ: ဂီတ, ရုပ်ရှင်, တီဗီ, နှင့်မဂ္ဂဇင်းများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ Exposure Black နဲ့ White ကမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ကလေးအထူးကု။ 2006; 117: 1018-1027 ။ [PubMed]
et al Cavazos-Rehg PA ဆိုပြီး, Krauss MJ, Spitznagel EL, Schootman M က, Bucholz KK, Peipert JF, Bierut LJ ။ အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်၏ခေတ်။ စျေးကြီးသော။ 2009; 80: 158-162 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Collins RL, Elliott သည် MN, Berry ဟာ SH, Kanouse DE, Kunkel: D, Hunter SB, ရုပ်မြင်သံကြားပေါ် Miu အေအကဲခတ်လိင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုစတင်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ကလေးအထူးကု။ 2004; 114: e280-e289 ။ မှရယူရန် http://www.pediatricsdigest.mobi/content/114/3/e280.full။ [PubMed]
Cooper က ML ။ အရက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားများနှင့်လူငယ်အကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: အသက်သေအထောက်အထားများသုံးသပ်စိစစ်။ အရက်အပေါ်လေ့လာရေးဂျာနယ်။ 2002; 14: 101-117 ။ [PubMed]
Ka, ဂျရတ်က M, မျောက်လွှဲကျော် FX, Stoolmiller M က, သေတမ်းစာက TA, Sargent JD Worth Dal Cin S က။ အကဲခတ်ခြင်းနှင့်အရက်သောက်: မျှော်လင့်ရှေ့ပြေးပုံစံနှင့်မိတ်ဆွေများက '' အရက်အသုံးပြုမှုဆယ်ကျော်သက်အရက်သောက်အပေါ်ရုပ်ရှင်များတွင်အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းမှထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖျန်ဖြေ။ ကနျြးမာရေးစိတ်ပညာ။ 2009; 28: 473-483 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Dalton MA, သဲသောင်ပြင် ML, et al Adachi-Mejia လေး, Longacre MR, Matzkin AL, Sargent JD, တိတု-Ernstoff L ကို။ ရုပ်ရှင်ဆေးလိပ်သောက်စောစောထိတွေ့မှုဟောင်းများကိုဆယ်ကျော်သက်လူငယ်လူကြီးများအားဖြင့်သာတည်ဆေးလိပ်သောက်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ကလေးအထူးကု။ 2009; 123: 551-558 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
က de Leeuw RNH, Sargent JD, Stoolmiller M က, Scholte RHJ, အိန်ဂျယ် RCME, Tanski SE ။ R-rated ရုပ်ရှင်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အာရုံရှာကြံနှင့်အတူစတင်ခြင်းဆေးလိပ်၏အသင်းမှ။ ကလေးအထူးကု။ 2011; 127: 96-105 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Donohew L ကို, Zimmerman R ကို, Cupp PS, Novak က S, Colon S ကိုအာဗေလ R. Sensation, ထကြွလွယ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်များလိင်ရှာကြံ: ကြားဝင်၏အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်ဒီဇိုင်းများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ။ 2000; 28: 1079-1091 ။
မျောက်လွှဲကျော် FX, Pomery EA ၏, ဂျရတ်က M, Sargent JD, Weng ကို C, သေတမ်းစာက TA, Yeh H ကို, et al ။ ဆယ်ကျော်သက်အရက်သိမြင်မှုနှင့်စားသုံးမှုအပေါ်ရွယ်တူများနှင့်မီဒီယာများ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်လူမျိုးရေးကွဲပြားမှု: လူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအဖြစ်မီဒီယာ။ ကိုစှဲအပြုအမူ၏စိတ်ပညာ။ 2010; 24: 649-659 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gunasekera H ကို, ချပ်မန်းက S, ကမ့်ဘဲလ်အက်စ်လိင်နှင့်လူကြိုက်များရုပ်ရှင်များတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ: ထိပ် 200 ရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဆေးပညာ၏ Royal Society ၏ဂျာနယ်။ 2005; 98: 464-470 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Guttmacher Institute မှ။ အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်ကိုယ်ဝန်, ကလေးမွေးဖွားနှင့်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ: အမျိုးသားနှင့်ပြည်နယ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအပြေးပြိုင်ပွဲနှင့်လူမျိုးစုသည်။ မှရယူရန် 2010 http://www.guttmacher.org/pubs/USTP-trends.pdf.
Halpern မှန် CT, Hallfors: D, Bauer DJ သမား, Iritani B, Waller မဂ္ဂါဝပ်, HIV ပိုးနှင့်အခြားလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများအတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်အပြုအမူပုံစံများအတွက်လူမျိုးရေးနှင့်ကျား, မကွဲပြားမှု၏ချိုအိပ်ချ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်အမြင်များ။ 2004; 36: 239-247 ။ [PubMed]
ဂျက်ဆင် C, Henriksen L ကို, Foshee VA သို့။ မိဘအုပ်ထိန်းမှုအညွှန်းကိန်း - ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အပြုအမူများကိုခန့်မှန်းခြင်း။ ကျန်းမာရေးပညာရေးနှင့်အပြုအမူ။ 1998; 25: 319-337 ။ [PubMed]
Kaestle အီး, Halpern မှန် CT, Miller က WC, Ford ကား CA. ပထမဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှာငယ်ရွယ်စဉ်များနှင့်မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်လူကြီးများအတွက်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု။ ကူးစက်ရောဂါ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2005; 161: 774-780 ။ [PubMed]
သည် L'Engle KL, Brown က JD, Kenneavy K. အဆိုပါအစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အရေးပါသောအခြေအနေတွင်ရှိပါသည်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး၏ဂျာနယ်။ 2006; 38: 186-192 ။ [PubMed]
Martino SC, Collins RL, Kanouse DE, Elliott သည် M က, Berry ဟာ SH ။ ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေးဖြန်ဖြေလူမှုသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2005; 89: 914-924 ။ [PubMed]
Morgenstern M က, Poelen EAP, Scholte R ကို, Karlsdottir S က, Jonsson SH, Mathis က F, Hanewinkel R ကို, et al ။ ရုပ်ရှင်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်ဆေးလိပ်သောက်အတွက် Smoking: ခြောက်လဥရောပနိုင်ငံများတွင် Cross-ယဉ်ကျေးမှုလေ့လာမှု။ Thorax ။ 2011; 66: 875-883 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Muthén LK, Muthén bo ။ Mplus အသုံးပြုသူရဲ့လမ်းညွှန်။5။ Los Angeles မြို့,, CA: အာဘော်; 1998-2007 ။
Nalkur PG, Jamieson PE, Romer ဃ 1950 ထံမှ 2006 မှထိပ်တန်းအဆင့်ရုပ်ရှင်များတွင်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်လိင်ပြအတွင်းအမေရိက၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စနစ်၏ Motion Picture Association ကများ၏ထိရောက်မှု။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး၏ဂျာနယ်။ 2010; 47: 440-447 ။ [PubMed]
အမျိုးသားကင်ဆာဌာန Institute ။ ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်လျှော့ချအတွက်မီဒီယာ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Bethesda, MD: ကျန်းမာရေးနှင့်လူ့န်ဆောင်မှုများ၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာန, ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes, အမျိုးသားကင်ဆာဌာန Institute; 2008 ။ ဇွန်, ဆေးရွက်ကြီးထိန်းချုပ်ရေး Monograph အမှတ် 19; NIH အရက်ဆိုင်။ အမှတ် 07-6242 ။
Pardun CJ, L'Engle KL, Brown က JD ။ ရလဒ်များထိတွေ့ချိတ်ဆက်: ခြောက်လမီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက် '' စားသုံးမှု။ mass ဆက်သွယ်ရေးနှင့် Society က။ 2005; 8: 75-91 ။
Pinkleton, Austin EW, Cohen ကို M က, ချန် Y ကို, ဆယ်ကျော်သက် '' ဗဟုသုတနှင့်လိင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်မီဒီယာပုံဖော်ခြင်းဆီသို့သဘောထားတွေအပေါ်တစ်ဦးရွယ်တူဦးဆောင်တဲ့မီဒီယာစာတတ်မြောက်ရေးသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏ Fitzgerald အီးအကျိုးသက်ရောက်မှု BE ။ ကနျြးမာရေးဆက်သွယ်ရေး။ 2008; 23: 462-472 ။ [PubMed]
Sargent JD, Stoolmiller M, Worth KA, Dal Cin S, Wills TA, Gibbons FX, Tanski S, et al ။ ရုပ်ရှင်များတွင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းပုံဖော်ခြင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်း - ၎င်းသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရှိဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ကလေး & ဆယ်ကျော်သက်ဆေးပညာ၏မော်ကွန်းတိုက်။ 2007; 161: 849-856 ။ [PubMed]
Sargent JD, သေတမ်းစာက TA, Stoolmiller M က, Gibson J ကို, မျောက်လွှဲကျော် FX ။ ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံများနှင့်အစောပိုင်း-စတင်ခြင်းဆယ်ကျော်သက်အရက်သောက်နှင့်အတူ၎င်း၏စပ်လျဉ်းအရက်သေစာသုံးစွဲခြင်း။ အရက်အပေါ်လေ့လာရေးဂျာနယ်။ 2006; 67: 54-65 ။ [PubMed]
Sargent JD, Worth Ka, သဲသောင်ပြင် M က, ဂျရတ်က M, Heatherton TF ။ ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံများအတွက်အပြုအမူအန္တာရာယ်မှထိတွေ့မှု၏ပြည်သူ့အင်အား-based အကဲဖြတ်။ ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများနှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များ။ 2008; 2: 134-151 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Steinberg L ကိုအဲလ်ဘတ်က D, Cauffman အီး, Banich M က, ဂရေဟမ်က S, Woolard ဂျေခေတ်အပြုအမူနှင့် Self-အစီရင်ခံစာအားဖြင့်ရည်ညွှန်းအဖြစ်အာရုံရှာခြင်းနှင့် Impulse အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု: တစ် dual-စနစ်များမော်ဒယ်အထောက်အထား။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ။ 2008; 44: 1764-1778 ။ [PubMed]
Stephenson က MT, Hoyle RH အ, Palmgreen P ကို, Slater MD ။ စိစစ်ခြင်းနှင့်အကြီးစားစစ်တမ်းများရှာအာရုံ၏အကျဉ်းချုပ်အစီအမံ။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည်။ 2003; 72: 279-286 ။ [PubMed]
Stoolmiller M က, ဂျရတ်က M, Sargent JD, Worth Ka, မျောက်လွှဲကျော် FX ။ R-rated ရုပ်ရှင်ကြည့်, အာရုံခံစားမှုရှာအတွက်ကြီးထွားမှု, နှင့်အရက်စတင်: အပြန်အလှန်နဲ့ဖြည့်ညှင်းဆိုးကျိုးများ။ ကာကွယ်တားဆီးရေးသိပ္ပံ။ 2010; 11: 1-13 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရပ်ကွက် LM, Epstein M က, Caruthers တစ်ဦးက, Merriwether အေအမျိုးသားများရဲ့မီဒီယာအသုံးပြုမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသိမြင်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ: တစ်ဖျန်ဖြေမော်ဒယ်စမ်းသပ်စဉ်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ။ 2011; 47: 592-602 ။ [PubMed]
Weinstock H ကို, Berman က S, အမေရိကန်လူငယ်များအကြား Cate ဒဗလျူလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ: အဖြစ်အပျက်နှင့်ပျံ့နှံ့ခန့်မှန်းချက်, 2000 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်အမြင်များ။ 2000; 36: 6-10 ။ [PubMed]
သေတမ်းစာက TA, မျောက်လွှဲကျော် FX, Sargent JD, ဂျရတ်က M, Lee က HR, Dal Cin အက်စ်ကောင်းမွန်သော Self-ထိန်းချုပ်မှုအလယ်အလတ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဆေးရွက်ကြီးနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းအပေါ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လေ့လာမှုများနှင့်အတူစမ်းသပ်မှု။ ကနျြးမာရေးစိတ်ပညာ။ 2010; 29: 539-549 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wright PJ ။ လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာသက်ရောက်မှု: ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်များအတွက်အရေးဆိုမှုများကိုသုံးသပ်ခြင်း။ ဆက်သွယ်ရေးနှစ်ချုပ်စာအုပ်။ 2011; 35: 343-386 ။
Zuckerman အမ်အပြုအမူအသုံးအနှုန်းတွေနဲ့အာရုံခံစားမှုရှာ၏ biosocial အခြေစိုက်စခန်း။ နယူးယောက်, NY: ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 1994 ။